सत्यमोहन जोशी दम्पत्तीले किन गरे शरीर दान ? यस्तो छ रहस्य « रिपोर्टर्स नेपाल
सत्यमोहन जोशी दम्पत्तीले किन गरे शरीर दान ? यस्तो छ रहस्य
माघ ३०, काठमाण्डौ । शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र उनकी पत्नी राधादेवी जोशीले मरणोपरान्त आफ्नो शरीर दान गर्ने घोषणा गरेका छन् । जोशी र उनकी पत्नीले मृत्युपछि शरीर किस्ट अस्पतालद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई दान गर्ने निर्णय गरेका हुन् । जोशी दम्पतीले सयबर्ष कटीसकेपछि पनि स्वस्थ जीवन बाँच्नेहरुको अंगका बारेमा बिद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्न पाउन भनेर शरीर दानको घोषणा गरेका हुन् ।
उमेरले १ सताब्दी कटेपनि वरिष्ठ संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी र उनकी पत्नी राधादेवी जोशीको जोश र उत्साहमा कुनै कमी छैन । ललितपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएका जोशी दम्पतीले सबैका सामू आफुहरुको मृत्यु पछि सम्पूर्ण शरीर दान गर्ने घोषणा गरेका थिए । आफु सय वर्षसम्म स्वस्थ भई बाँचीरहनुको रहस्य बिद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्न पाउन भनी शरीर दान गरेको शताब्दी पुरुष जोशीले बताएका थिए ।
ललितपुर नगरपालिकाको पहलमा सरकारले यस अघि नै सत्यमोहन जोशीको अनुहार अंकित मुद्धा र हुलाक टिकट सार्वजनिक गरीसकेको छ । मरीसकेपछि जे–जतिको हुलाक टिकट र सिक्का बनाए पनि आफू जिवित छँदै सरकारले सम्मान गरेकोमा जोशी निकै खुशी देखिन्थे ।
किष्ट अस्पतालले जोशी दम्पतीको निशुल्क औषधी उपचार गर्दै आईरहेको छ भने आगामी दिनमा उहाँका परीवारका सम्पूर्ण सदस्यको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा पनि लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छ ।
जोशीको अंगदानको निर्णय पछि सय बर्षसम्म बाँच्दा उनको फोक्सोको अवस्था कस्तो थियो ? मुटुको अवस्था कस्तो छ ? सबै जानकारी चिकित्सा क्षेत्रका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरेर पत्ता लगाऊन् भन्ने उद्देश्यले मरणोपरान्त अरू सबै संस्कार गरिसकेपछि शरीर दान गर्ने निर्णयमा आफु पुगेको जोशी दम्पतीले बताएका थिए । शरीरका अंग दान दिएको अवरहरु धेरै सुन्नमा पाएपनि नेपालमै सम्पूर्ण शरीर दान गरेका घटनाहरु भने कमै छन् ।
काठमाडौं, असोज ३ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो मान–पदवी ‘नेपाल रत्न’ मरणोपरान्त पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रदान
काठमाडौं, असोज ३ । प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ को महामारीबाट नेपाली नागरिकको जीवनरक्षा
भारतले प्रदान गरेको ४२ लाख बराबरको राहत सामग्री सासंद चौधरीद्वारा वितरण (फोटोफिचर)
भैरहवा, असोज ३ । भारत सरकारको सहयोगमा रुपन्देही जिल्लाका बाढी पहिरो/पीडितलाई राहत बितरण गरिएको छ